လက္ခဏာကြည့်တတ်တဲ့သူများ ..ရှိပါသလား … | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Entertainment » လက္ခဏာကြည့်တတ်တဲ့သူများ ..ရှိပါသလား …
လက္ခဏာကြည့်တတ်တဲ့သူများ ..ရှိပါသလား …
Posted by fatty on Sep 13, 2010 in Entertainment |7comments
ကျနော်တွေ့ဘူးသမျှ လက္ခဏာပုံစံတွေထဲမှာ တော်တော်ထူးခြားတဲ့ ပုံစံဖြစ်နေတာမို့ ပုံဆွဲပြီးတင်ပြလိုက်တာပါ .. အနီးစပ်ဆုံးအရေးကြီးတဲ့အမှတ်အသားတွေပါအောင်
ကြိုးစားပြီးဆွဲပြထားပါတယ် .. ၀ါသနာပါသူများရှိရင် လေ့လာကြည့်နိုင်အောင်ပါ .. ဒီလက္ခဏာပိုင်ရှင်ကို ခွင့်တောင်းပြီးမှ ပုံတူဆွဲတာပါ .. ရန်ကုန်မှာနာမယ်ကြီးဆရာများရှိ
ပေမဲ့ ဈေးကလည်း အနဲဆုံး သောင်း၈ဏန်းမို့ … ၀ါသနာရှင်များရှိရင် ကူညီဆွေးနွေးပေးကြပါ …
ဒီလက်ပိုင်ရှင်ရဲ့အဓိကထူးခြားချက်ကတော့ …. အပျော်တန်းဖဲကစားကြရင် ဖဲချပ်တွေကို မှောက်ထားပေမဲ့ ဘယ်ဖဲဆိုတာကို ပြောနိုင်ပါတယ်။ .. ပြီးတော့ နယ်ဘယ်လောက်ခြားခြား … အဲဒီလူဘာလုပ်နေသလဲဆိုတာကို မေး၇င်ပြောပြနိုင်ပါတယ် … ဒါပေမဲ့သူ့ကိုမေးရင် သူစိတ်ပါတဲ့ အခါမှသာ ပြောနိုင်ပါတယ်။ ..
တခါတခါ သူနဲ့ထိုင်ပြီးစကားပြောနေ၇င်း မျက်စိလေးမှိတ်ထားပြီး … အသိထဲက ဘယ်သူ့ဆီသွားပြမယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ်။ … ဥပမာ မောင်ကျော်ဆီ သွားပြမယ်ဆိုပါတော့
မောင်ကျော်က တခြား၇ပ်ကွက်မှာနေတာပါ … နောက်နေ့မောင်ကျော်နဲ့တွေ့၇င် မင်းသူငယ်ချင်း ကိုတွေ့လိုက်တယ်ကွဆိုပြီးပြောပါတယ်။ …အဲဒီလိုမျိုးပေါ့ …..
သူကအပျော်တန်းဘဲ လုပ်ပြပါတယ် … ကျနော်အကြမ်းဖျဉ်းလောက်ဘဲပြောပြတာပါ ..ဒါ့ထက်ထူးခြားတာတွေ ရှိပါသေးတယ် … သူ့လက္ခဏာကို ကြည့်ရအောင် ….ဘာကြောင့်လဲ .. ဘယ်အမှတ်အသားကြောင့်လဲ …..
အသက်လမ်းကြောင်းက ၂ခု..အရံအသက်လမ်းကြောင်းနဲ့မို့ ..သူများသတ်လို့မသေ..။အက်စိဒန့်နဲ့မသေ..သဘာဝအတိုင်းအသက်ကြီးမှသေပါမယ်..။
– ထီးရိုးကလည်း ထင်ထင်ရှားရှားမို့… အဆင်ပြေတဲ့အေးအေးဆေးဆေးဘ၀မှာနေ၇ပါမယ်။
– ဂမ်ဘီရကြက်ခြေရှိတော့… ပြောတာတွေဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ (ဖြစ်တာတွေလည်း ပြောနိုင်ပါတယ်)
– ကြာသပသေးဂြိုလ်ခုံပေါ်မှာ..ရှိတဲ့မျဉ်းတွေကြောင့်..အိပ်မက်မှန်တတ်တယ်… ပညာအရာမှာ အောင်မြင်သူဖြစ်နိုင်ပါတယ်..။
– တနင်္ဂနွေဂြိုလ်ခုံက အောင်မြင်ရေးလမ်းကြောင်းထင်းထင်းရှိတာမို့ ..အောင်မြင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်မှာပါ။
– ကြာဖူးတွေလည်း နေရာနှံ့ ပြနေတာမို့ … ခြုံပြောရရင်တော့..လက်ညိုးအောက်က အစင်းတွေကြောင့်..သူကလူထူးလူဆန်းဖြစ်နေတာလို့ထင်ပါကြောင်း..
တကယ်လို့ အဲဒီလူနဲ့.. ထပ်တွေ့ဖြစ်ရင်..အိုစမာဘင်လဒင်တယောက်ဘာလုပ်နေလဲ..နေကောင်းရဲ့လား.. ဘယ်နယ်နေလဲ…မေးပေးပါနော်..။
အပြန်အလှန်အနေနဲ့..ထီကိုသာပုံမှန်ထိုးဖို့..လက်ခဏာဆ၇ာကပြောလိုက်တယ်လို့.. ပြောလိုက်ပါ။ ထီအကြီးကြီးပေါက်မဲ့လက်ခဏာဖြစ်လို့ပါ။
ထင်တာ ရမ်းပြီး မှန်းပြောလိုက်အုန်းမယ် လက်ဝါးက ပုံတွေတော့ ကြည့်တတ်ဘူး။ အင်္ဂလိပ်စာ မေဂျာ ပထမနှစ်တုန်းက သင်တဲ့ ဖတ်စာထဲမှာ ရုရှားက မိန်းကလေး ဘယ်ပစ္စည်းကို မဆို ထိလိုက်ရုံနဲ့ အထဲမှာ ဘာရှိလဲဆိုတာ သိနိုင်တယ် ဆိုတာလေး ပါတယ်။ အတိအကျတော့မသိဘူး။ အဲလိုမျိုးလေး များ ဖြစ်နေမလား။ ထူးဆန်းထွေလာ ဆိုတာ လူတွေကြားမှာတော့ တခါတရံ မြင်ဘူးရတာတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ သရဲ မွေးပြီး လုပ်ပြတာ မျိုး မဟုတ်ရင်တော့ နောက်တမျိုး ဖြစ်နိုင်တယ် အတိတ်ဘ၀တွေက ဂမ္ဘီရ အလုပ်တွေ အပြင်းအထန် အားထုတ်ဘူးတာမျိုး အဲဒီလို ဘ၀တွေက အရှိန်တွေ ယခု ဘ၀တွေမှာ အကျိုးပေးတာမျိုး တွေလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။
ဒီလိုလက္ခဏာရှင်မျိုးကတော့ ရှားပါးတဲ့ လူမျိုးလို့ ပဲဆိုနိုင်ပါတယ်……ဘာဖြစ်လို့ လဲဆိုတော့ ကြားဖူးသမျှတွေထဲမှာတော့ အထူးအဆန်းပဲ…..သွားလိုတဲ့ နေရာကိုသွားလို့ ရတယ်ဆိုတော့ ကောင်းတယ်နော်………….ဘုရားတ၇ားကိုသာပိုပြီးအာရုံစိုက်မယ်ဆို၇င်ပိုတေကာင်းမယ်လို့ အကြံပေးပါရစေ……..သူများတွေပြောသလိုသူရဲမွေးတာတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ပဲထင်ပါတယ်……..ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
လက္ခဏာရှင်မှာ က လက်ချောင်းငါးချောင်းရှိတယ်ဆိုတော့
အသက်လမ်းကြောင်းက ၂ခု..အရံအသက်လမ်းကြောင်းနဲ့ မို့ ..သူများသတ်လို့မသေ..။အက်စိဒန့် နဲ့ မသေ..သဘာဝအတိုင်းအသက်ကြီးမှသေပါမယ်..။ ဆိုပြန်တော့
သူများမြောက်ပေးတိုင်း ဘီလာဒင်ကိုတော့သွားမရှာလေနဲ့ 
အခုကိုယ်ကမကြီးသေးဘူးလေ အသက် ဘာလုပ်လုပ်သေမှာမဟူတ်သေးဘူး
အမေရိကန်မှာရှိတဲ့ အမြင့်ဆုံးတဲအပေါ်တက်ပြီး ခုန်ချပြတာကို ရုံသွင်းမယ်ဆိုရင် သောက်သောက်လဲဝင်ငွေတွေရလိမ့်မယ်
မင်္ဂလာစုံတွဲ ရှစ်ဆယ့်ခြောက်ခါ ဆက်တိုက်ပေါက်တယ် ဆိုတာလောက်ကတော့ သနားတယ်ဖြစ်သွားမယ်
လက်ဖ၀ါးအဆုံးက အခွလေးကတော့ ကူညီဖေးမမယ့်သူက အဆင်သင့်ပါတဲ့။
လက်ဖ၀ါးအောက်ခြေနားက အသက်လမ်းကြောင်းက အပေါ်ထွက်နေတဲ့အသက်ကလေးက အသက်ကြိးပိုင်းမှာ အောင်မြင်မူ့နဲု့ဆုံတွေ့နိုင်အုံးမယ်လို့ပြနေပါတယ်။
လက်ချောင်းတွေမှာ အဆစ်တွေ အရစ်တွေပါအောင်ဆွဲထားရင် ဒီလူ စဥ်းစားဥာဏ်ကြီးမကြီးပြောနိုင်အုံးမှာပါ။
စိတ်ကူးနဲ့ရေးထားတာမဟုတ်ဘဲ တကယ်လူအစစ်ရဲ့လက်ခဏာသာဖြစ်ရင် အတော်ကိုတွေ့ရခဲ့တဲ့သူလို့ပြောနိုင်အောင်ထူးခြားနေပါတယ်နော်။
အချစ်ရေးလမ်းကြောင်းရဲ့ ဒေါင့်ပေါ်မှာ အ၀ိုက်လေးတစ်ခုပါနေတယ်ဆိုရင်တော့ သေလောက်အောင်ပြင်းပြတဲ့အချစ်တဲ့ . . .
အချစ်ရေးလမ်းကြောင်းက လက်ညှိုးနဲ့လက်ခလယ်ကို ကျော်နေရင်တော့ အဲဒီလူဟာ ရည်းစားတစ်ယောက်နဲ့မလုံလောက် တဲ့လူတဲ့
လက်ညှိုးနဲ့လက်ခလယ်ကြားထဲမှာဆိုရင်တော့ တစ်ယောက်ဆိုတစ်ယောက်သိပ်ချစ်တတ်တယ်တဲ့ . . .နှစ်ခွဖြစ်နေရင်တော့ သေလောက်အောင် ခံစားရတတ်တယ်တဲ့ . . .